Kpọmkwem Na-achịkwa osdị onunu ogwu Infusion mgbapụta Na ntụtụ mgbapụta Site Sunbright
Dị ọgwụ na-ezighi ezi nke ndị nọọsụ ụlọ ọgwụ na-ebute na -edakarị ajọ ihe ọghọm ahụike. Ya mere, Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd. ka ulo oru abụọ echekwa sirinji infusion mgbapụta, nke bụ infusion mgbapụta SUN-900 na sirinji mgbapụta SUN-500 na strictl ...GỤKWUO »
Sunbright ji aka ya bido oru nke Pixiu Series nke Monitors Patient
Nlekọta ahụike nke ahụike bụ ngwaọrụ ma ọ bụ usoro nke na-atụle ma na-achịkwa usoro nchịkwa nke onye ọrịa, ndị dọkịta nwere ike iji ya tụnyere uru a maara ama, ọ ga-echetara ma ọ gafere oke. Dị ka ihe owuwu ahụ, ọ bụ otu anọ categorie ...GỤKWUO »
Oge ọhụụ malitere site na afọ iri nke Sunbright
Multipara onye nyocha bụ ngwa ahụike ma ọ bụ sistemụ nke na-atụle ma na-achịkwa usoro ọgwụgwọ nke onye ọrịa, ma nwee ike iji ya tụnyere uru elele, ma nwee ike izipu mkpu ma ọ bụrụ na ọ gafere oke. Ugbu a anyị nwere ọhụụ ọhụụ ọhụụ dị iche iche: ...GỤKWUO »
Sunbright High Quality ECG Machine: Applicationkpụrụ Ntuziaka Na Ọrụ
ECG bụ teknụzụ nke na-eji electrocardiograph dekọọ mgbanwe nke ọrụ eletriki nke obi n'oge mkpụrụ obi ọ bụla sitere na ahụ. Atụmatụ dị iche iche ọwa dị: 3-ọwa ECG, 6-ọwa ECG 7 inch agba Ikanam ngosi ihuenyo mmetụ S ...GỤKWUO »
Sayensị Na-ewu ewu: Gịnị bụ igwe ultrasonic?
Ma ọ bụ nlele ahụike ma ọ bụ ịga ụlọ ọgwụ, dọkịta na-ajụkarị onye ọrịa ahụ maka nyocha ultrasound. A na-eji nghọta nke ọtụtụ mmadụ banyere igwe ultrasound maka ịnwale ụmụ nwanyị dị ime. N'ezie, a naghị eji igwe eji arụ ọrụ naanị maka pregn ...GỤKWUO »
Afọ iri nke mma agha: Sunbright Ultrasound Machine Na-eche Karịa Gị
Anyanwụ-906A / B / C usoro bụ nọọrọ onwe ha nnyocha na mmepe ngwaahịa site Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd. N'oge ọdịda, mgbe nile polishing na-adakarị ule, ebe ọ bụ na SUN-906A / B / C usoro ẹkenam, ya akwụghachila ụgwọ dị elu aha ...GỤKWUO »